Ngingazibona ngokushesha yini izinto eziseshe kakhulu ku-Amazon?
Impendulo emifushane nguyebo, ungakwazi. Futhi akulona kunzima ukuthola izinto ezisesha kakhulu ku-Amazon ukuze uzifake kuhlu lwakho futhi ekugcineni uhlangabezane nalezi zidingo ze-niche ngokugcwele. U-Ann udinga ukuthi ube ne-toolkit efanele noma i-platform eyodwa-stop ehlanganisa zonke izidingo zakho ngokuphathelene nokucwaninga okuncintisana nokulandela amamethrikhi wokusebenza okuyinhloko e-Amazon. Kodwa kuthiwani uma ngithi ngisho nokucwaninga okuphezulu okufakiwe namathuluzi wokulandelela kungumkhakha omncane we-puzzle enkulu equkethe wonke amathuba amasha wokuthengisa okwamanje avuliwe ngenxa yesabelo sezingonyama sabathengisi abathengisa lapho - types commercial real estate appraisal reports. Ngakho-ke, ngezansi ngizokubonisa ezinye izinketho ezizwakalayo ukuze uthole kalula izinto ezifunwa kakhulu ku-Amazon futhi uthole imibono, ukusikisela kwe-niche, kanye nezitayela ezivamile kanye nezentengiso ezingase zithinte ukuthengisa kwakho ukusebenza kule ndawo emakethe egcwele kakhulu .
I-Jungle Scout - leli thuluzi eliku-intanethi kungenzeka izinto ku-Amazon. Imiphi imikhiqizo okwamanje ephezulu kwesidingo samakhasimende? Imiphi imikhiqizo yinto efunwa kakhulu ku-Amazon? Yimaphi ama-niches athola ukuthandwa? Yini ongayenza kangcono kunabancintisana nabo abaseduze kakhulu? Ingabe kukhona amaphutha nezinqumo ezingalungile kakade ezithathwe izitha zakho zemakethe ukuze ungalokothi uboshwe ngaleyo ndlela? Ungayithola kanjani manje imithombo yemali efihlekile futhi izinto ezisengozini ezithengiswayo? I-jungle scout niche hunter iyisithuluzi sokukunika zonke izimpendulo ezidingekayo ukuze ungangeni emncintiswaneni wokuthengisa odlamelayo futhi uhola phambili ku-Amazon.
Ukugcina Amanani Othrekhi
Keepa - iyithuluzi lakho lokugcina amanani ukuze uthole isithombe esigcwele samanani okwamanje okubonakalayo ezintweni ezifunwa kakhulu ku-Amazon (ngekhulu umlando wokugcina umlando utholakala ukuze ubambe izitayela eziphambili ezishayela imboni ye-ecommerce kanye ne-drop-shipping-business ibhizinisi). Lolu luhlaka lwe-inthanethi olwenza kahle lusekelwa emazweni angu-11 ahlukene azayo ngezilimi eziningi ukuze akusize ngokuqhathanisa amanani, izaziso zokudonsa intengo, izaziso zokutholakala, izikhala zomlando wamanani wamanani, kanye namadili akamuva e-Amazon okufanele uwaqaphele .
Ukuya ku-Inhloli kumncintiselwano ngamagama angukhiye
Ububanzi - liyikhiye elingukhiye eliphakeme futhi ithuluzi lokucwaninga lomkhiqizo. Sebenzisa ukuze uthole izinto ezisesha kakhulu ku-Amazon, ngokuhambisana namagama angukhiye athandwayo aphezulu abalingani bakho ababekayo - futhi usuqedile. Leli thuluzi libuye lisize ekuthuthukiseni imikhankaso yakho ye-Pay-Per-Click ngamagama angukhiye angcono kakhulu, kanye nokukubonisa ama-niches angase athembise ngemali ephezulu enenzuzo ngokumelene nokuncintisana okulinganiselwe. Ngaphezu kwalokho, ububanzi bubonakala busebenza ngokukhethekile uma kuziwa ekulawulweni kwezinhlekelele nakuzo zonke izibalo ezinzima zokulinganisa inani lakho lokuthengisa namanani, noma isibonelo, sinokulindela okucacile kwenzuzo emva kwe-FBA.